Xiaoxun Children Smartwatch S2, famantaranandro marani-tsaina natao ho an'ny ankizy | Androidsis
Xiaomi dia mpanamboatra finday manana marika kely vitsivitsy manamboatra ny tanany. Ny iray amin'izy ireo dia Xiaoxun, orinasa iray izay mitondra ho antsika smartwatch vaovao, iray izay natokana ho an'ny ankizy noho ny fisehoany manintona sy ny lafiny teknika: el Xiaoxun Ankizy Smartwatch S2.
Ity fitaovana vaovao ity dia manana endrika tsotra, saingy manafina fampiasa maro izay manampy ny ankizy hifandray, satria afaka mifampiresaka aminy ianao. Na izany aza, atolotra azy amin'ny sokajin-taona rehetra ihany izy io, satria ity smartwatch vaovao ity dia manana toetra mahaliana maro izay azon'ny rehetra ampiasaina amin'ny alàlan'ny andavanandro. Atolotray anao izany!
Tadidio fa ny Xiaoxun Children Smartwatch S1 fanta-daza dia natomboka teny an-tsena tamin'ny fiandohan'ny volana aogositra lasa teo. Satria manomboka indray any amin'ny firenena samihafa ny fampianarana, Xiaomi dia nanapa-kevitra ny handefa kinova nohatsaraina amin'ity fitaovana ity, ary eto izahay miaraka amin'ny mpandimby azy, izay Vao nampidirina tamin'ny tsena sinoa izy tamin'ny vidiny 299 yuan (eo ho eo ny 37 euro.), ary hanao varotra iraisam-pirenena atsy ho atsy.
Ny Xiaoxun Children Smartwatch S2 dia manana efijery 1.3 santimetatra lava, izay arovan'ny vera miolaka 2.5D. Ity dia tompon'andraikitra amin'ny fampisehoana amintsika ny interface tsotra izay mampiseho ny ora, ny daty ary ny mety rehetra atolotray ho antsika ity fitaovana ity.
Mikasika ny faharetan'ny batterie misy azy dia manana fahaiza-manao lehibe izy io, raha toa ka mihevitra isika fa miresaka momba ny azo itondra, satria 730 mAh io. Miantoka izany ny orinasa maharitra 7 andro ny faharetany ary 9 ora ny resaka.
Ny safidim-pifandraisana atolotry ity famantaranandro ity dia misy an'i Beidou sy ny rafitra GPS izay tsy hamela ny zaza mitafy azy. Ho fanampin'izay, manana fitoeram-batana karazana nano SIM izy, seranan-tsambo USB ary WiFi namboarina. Mandritra izany fotoana izany dia manana faharanitan-tsaina artifisialy izy, manome antsika safidy toa ny fandikana lahatsoratra, ny fihirana hira ary ny fanaovana tononkalo.
ihany koa manana sensor sary tsy misy vahaolana ambany. Ho fanampin'izany, ny ray aman-dreny koa dia afaka mifehy ny smartwatch amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso lavitra atolotry ny fakantsary ary maka sary lavitra raha irin'izy ireo.
Xiaoxun Children Smartwatch S2: fifandraisana, fiarovana ary fialamboly betsaka
Ny Xiaoxun Children Smartwatch S2 dia mampiasa antena finday mahazatra (LDS antena) avo lenta, izay manome famantarana milamina ary mitantana hampihenana ny fanelingelenana rehetra.
Mikasika ny fiarovana dia tsara ny manonona izany manolotra safidy fanaovana antso isan-karazany ho an'ny fifandraisana maika. Azonao atao koa ny mamorona chat group amin'ny alàlan'ny WeChat hifandraisana hatrany amin'ny namana, fianakaviana, namana akaiky ary olom-pantatra.
Ary farany, tsara ny manonona izany Ny famantaranandro vaovao nataon'i Xiaoxun dia misy lalao maromaro napetraka, noho izany dia mety ho an'ny ankizy rehetra izany, satria tsy hoe manana fiarovana lehibe sy safidy fifandraisana marobe amin'ny fifandraisana izy, fa mahafinaritra be koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Xiaoxun Children Smartwatch S2, smartwatch lafo vidy natao ho an'ny ankizy
Ny efijery an'ny Xiaomi Redmi Note 6 dia tafaporitsaka: tontonana 6.18 "misy ny notch
Android 9.0 Pie dia mifanaraka amin'ny gamepad Sony DualShock 4 sy Xbox One izao